Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ebe 11 kachasị mma osimiri maka oge ọkọchị 2019
Akụkọ na -agbasa Australia • Akụkọ Bahamas Breaking • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Dominican Republic • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akwụkwọ akụkọ French Polynesia • Akụkọ na -agbasa na Greece • Akụkọ Maldives na -agbasa • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Turkey na -agbasa News • Akwụkwọ akụkọ USA
O nwere ike ọ gaghị adị ya ka ọ pụta n'èzí, mana oge ọkọchị nke 2019 dị nso n'akụkụ. Ma ọ dịghị oge dị mma karịa ugbu a iji hazie ụzọ mgbapụ nke osimiri gị. Ka emechara, ịzụ ahịa maka obodo ndị dị n'ụsọ osimiri na ebe izu ike n’akụkụ mmiri ga-eme ka obi dị gị mma banyere igwe oyi nke oge opupu ihe ubi. N'okpuru, ị ga-ahụ ebe osimiri 11 anyị kacha amasị maka 2019, gụnyere akara ngosi ezumike maka ụfọdụ ndị na-adakarị n'okpuru radar.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ọmarịcha, ebe mara mma maka ezumike zuru ezu, mgbe ahụ Cancun, Mexico, nwere ike ịbụ ọnọdụ zuru oke maka gị. Cancun abụwo otu ebe kachasị ewu ewu n'ụwa maka ezumike ezumike n'akụkụ osimiri ruo ọtụtụ iri afọ, ọ dịkwa mfe ịhụ ihe kpatara ya. Anyanwụ na-acha gburugburu, oke osimiri ndị na-ekwo ekwo, mmiri turquoise, nri ndị mara mma, na oke ọkụ na-eme ka nke a bụrụ ebe kachasị mma maka ezumike ezumike gị.
Clear mmiri na-acha anụnụ anụnụ, anwụ na-enweghị anwụ na njem ụgbọ mmiri dị ịtụnanya, Chania, obodo dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ nke Crete, bụ ebe kachasị elu oge ọkọchị, na 2019 bụ afọ ị ga-aga. Ma ị na-na nlegharị nke nlegharị anya, njem ma ọ bụ nanị sunbathing, Chania nwere ihe na-enye ndị ọbịa nke afọ niile na ọdịmma. Venlọ ọkụ na ọdụ ụgbọ mmiri nke Venet nke narị afọ nke 14 ga-ahụrịrị mgbe ị na-eleta obodo Grik akụkọ ihe mere eme.
Chania bu kwa otutu ugbommiri ndi nwere ugegbe gbara okpuru iji duru ndi nleta na nleghari anya nke oma na azu, tinyere ugbo agha nke abuo nke agha nke dara na mmiri Cretan. Ihe ọ bụla ị kpebiri ime na Krit, ị ga-achọpụta na agwaetiti kachasị ukwuu na Gris, na Chania kpọmkwem, bụ ebe ezumike ezumike dị mma.
Tahiti bụ ebe bọket na-aga, n'agbanyeghịkwa na ọ bụ agwaetiti kacha ibu na French Polynesia, n'ezie ọ bụ paradaịs na-ekpo ọkụ. Site na lagoons miri emi na-acha anụnụ anụnụ ruo na kpakpando jupụtara n'abalị, Tahiti bụ otu n'ime ebe kachasị mma n'oge okpomọkụ n'ụwa. Ezigbo ihe omume ọdịnala nke na-eme kwa afọ na Tahiti na-eme ka agwaetiti ahụ bụrụ ebe magburu onwe ya iji hụ ọdịbendị na ụdị dị iche iche nke South Pacific.
Okpokoro ozi kwesịrị-acha ọcha, osimiri Punta Cana ga-eme ka oge ọkọchị nke 2019 cheta. Ọ bụrụ na ị na-achọ izu ike, dara oke ọnụ, ezumike jupụtara na anyanwụ, mgbe ahụ Punta Cana bụ ebe kachasị mma maka gị. Ọ bụ ebe obibi nke a na-ahụkarị n'etiti osimiri kachasị mma na mbara ala yana ọtụtụ ebe ntụrụndụ na-emeri. Fọdụ n’ime ihe omume dị n’obodo ezumike n’obodo ụsọ mmiri ahụ gụnyere ikuku ikuku, ndaba mmiri, kayak, ụgbọ mmiri ọsọ ọsọ, ịzụ ahịa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. E kwupụtara mpaghara mmiri gbara gburugburu obodo ahụ ogige ogige mmiri na 2012, na-eme ka ọ bụrụ ebe zuru oke maka ịlele ndụ oke osimiri n'okpuru oke osimiri.
Florida nwere ụfọdụ oke osimiri kachasị mma n’ụwa nwere oji, ọcha, na aja okike jikọtara ọnụ na mmiri ya na-acha anụnụ anụnụ. Ala ndịda a na United States na-enyekwa agwaetiti ndị dịpụrụ adịpụ maka ndị ọbịa izu ike ma nwee obi ụtọ ma ọ bụrụ n'ezie na ha na-achọ ịgbanahụ nrụgide niile nke ndụ. Ihu igwe dị mma na oge niile, ma oge ọkọchị bụ mgbe Florida na-adị ndụ n'ezie maka ndị obodo na ndị ezumike. Don'tkwesighi ị ga njem ụwa niile iji ruo paradaịs ebe okpomọkụ.
Gold Coast nke Australia bụ otu n’ime ebe kachasị mma osimiri n’akụkụ ụwa. Y’oburu n’acho ubochi juputara n’igwe, aja, na ihe nlere anya nke uwa, mgbe ahu ka Gold Coast gha di n’elu elu ebe ị na-azo. N'ihi egwuregwu nke Gold Coast Commonwealth n'afọ gara aga, obodo ahụ ghọrọ ọbụna ebe kachasị mma ileta n'ihi mmepe ngwa ngwa na mpaghara ahụ. Publọ oriri na ọ andụ andụ na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ dị mma maka ikiri ka anyanwụ na-ada ma soro ndị bi na-eme oriri mgbe ogologo ụbọchị gachara n'anyanwụ na n'oké osimiri.
Marmaris amaara na ọ nwere ntakịrị ihe ọ bụla site na oke osimiri shingle ya ruo ogologo aja ọcha ya, na-eme ka ọ bụrụ ebe ezumike 2019 dị mma. Ndagwurugwu Marmaris nke Ugwu Ugwu na mmiri ya na-acha anụnụ anụnụ bụ ebe dị egwu maka egwuregwu mmiri, ọkachasị, ndakpu mmiri na ịkwọ ụgbọ mmiri.
Ppingzụ ahịa na Marmaris bụ njem n’onwe ya. Obodo a nwere ụlọ ahịa n'elu ụlọ ahịa maka ịchọta ihe ọ bụla obi gị nwere ike ịchọ. Turkey abụwo mgbe amaara ama ama ama na Europe na-aga ahịa, Marmaris na-ebikwa elu.
Ọzọkwa, Marmaris na-enye akụkọ ihe mere eme na-enweghị mgbagha. Nimera Cave na Marmaris castle bụ ihe fọdụrụ nke ọdịnala Turkey oge ochie, otu n'ime ihe ochie ole na ole fọdụrụ mgbe ala ọma jijiji 1957 nke fọrọ nke nta ka ọ bibie obodo ahụ. Ndụ abalị na Marmaris bụkwa otu n'ime ndụ kacha mma na Turkey niile, nwere ọtụtụ olulu mmiri na ebe egwu dị egwu iji mezuo ụbọchị ịgagharị na nlegharị anya.
Seychelles, Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa
Ọ bụrụ na ị hụrụ izu ike site na echiche na-enweghị mgbochi nke ájá na oké osimiri, ndị Seychelles bụ ebe dị mma iji kpọọ ụlọ n'oge okpomọkụ a. N'ịbụ nke dị na mmiri na-ekpo ọkụ ma doo anya na Oke Osimiri Indian, agwaetiti a nke agwaetiti 115 ga-ewepụ ume gị.
Oke osimiri zuru oke maka imikpu mmiri na igwu mmiri na igwu mmiri iji lelee imerime ụdị azụ na coral nke na-eto n'okpuru oke osimiri. Ndị otu gị ndị na-adịghị ahụ oke osimiri ga-anụ ụtọ ịgagharị n'oké ọhịa ndị dị nso. Ọnọdụ ihu igwe dị mma na ebe a na-apụghị imeri emeri bụ naanị ụfọdụ ihe kpatara Seychelles ji bụrụ ebe ịwụ-ịwụ maka ọtụtụ iri afọ. Lelee mpaghara a na ndepụta gị n'oge ọkọchị a.
Bahamas bụ ebe magburu onwe ya maka onye ọ bụla nke na-achọ ịtọpụ ma zuo ike na nwayọ, osimiri mara mma mara mma - na onye na-adịghị? Agwaetiti a dị jụụ, nke a maara maka mkpọtụ azụ ya, bụ ebe ndị hụrụ osimiri n'akụkụ ụwa na-alaghachi kwa afọ maka agwaetiti na-atọ ọchị. Ndụ dị n'okirikiri ebe a bụkwa ihe pụrụ iche, na-eme ka ọ bụrụ ebe kachasị mma maka nsị, mmiri na ihe omume ndị ọzọ dị n'okpuru mmiri.
Côte D'Azur, France, bụ otu n'ime ezumike ezumike kacha mma na Europe. Ma ọ bụ ma ama lavish Monte Carlo ịbụ onye isi ma ọ bụ ihe osise-zuru okè resotu obodo nke Cannes, ogologo ọlaedo n'ikperé mmiri na-eme ka ọ dị gị ka ị dị afọ ole na ole site na mkpọtụ na ọgba aghara nke ọtụtụ obodo ndị dị na Europe. Obi abụọ adịghị ya na ị ga-enwe ntụsara ahụ n'akụkụ osimiri ahụ ma na-ekiri ka ndị mara mma bi n'ebe ahụ na-agabiga.
Maldives, Ndịda Eshia
Agwaetiti Maldives bu otu ezigbo okpueze nke oke osimiri Indian. Ihe mejupụtara karịa agwaetiti coral 1,000 na agwaetiti 26, ọ bụ ebe zuru oke iji zuru ike ma zuru ike kpamkpam n'okpuru nkwụ na-efegharị. Agbanyeghị, ndị Maldives makwaara maka ụfọdụ ihe egwu kachasị egwu n'ụwa, gụnyere nsị, mmiri mmiri, sọfụfụ na ihe ndị ọzọ. Agwaetiti ndị ahụ dị mma iji gbanahụ nrụgide nke ndụ kwa ụbọchị ma mikpuo onwe gị na gburugburu ebe obibi. N'ebe a, ịnwere ike ịnọdụ ala ma zuru ike ka ị na-ele ụwa na-agabiga.
Inwere onwe gị ezumike ezumike osimiri a n'oge a abụghị ihe ị ga - eme ma ịhọrọ ebe zuru oke nwere ike isi ike. Họrọ otu n'ime ebe 11 dị n'elu, ị gha eme ka oge ọkọchị nke 2019 cheta.
Ike Cannes Caribbean nnukwu ụlọ ọgba center Century ego obodo klas Clear ụsọ oké osimiri Okirikiri ala obodo ndi mmadu Egwuregwu Commonwealth zuru ezu coral nkuku di na nwunye kwụsịrị Crete okpueze omenala omenala kwa ọtụtụ iri afọ di iche iche mmiri Dominican Dominican Republic ala n'ihi n'oge Ala ọma jijiji East East Africa ntụrụndụ mgbapụ European magburu onwe osisi -ada ọkacha mmasị chọta achọta azụ Florida nri ọhịa France French French Polynesia fun egwuregwu pụọ iko Gaba! gold Gold Coast ọlaedo kasị ukwuu Greece Greek ọdụ ụgbọ mmiri akụkọ ihe mere eme akụkọ ihe mere eme ezumike ezumike ezumike home ezumike iconic II Indian Oke Osimiri India agwaetiti jets dị nnọọ njiko ala ndụ ìhè ulo oku amasị ndepụta -ebi obodo ebe -achọ n'anya ndị hụrụ mara mma Maldives agha mmiri Mexico mara mma kasị ewu ewu ugwu music eke abalị nightlife Northwest oké osimiri -enye n'èzí Pacific paradise park rue Foto ebe plan uwa Polynesia ewu ewu onwe Punta cana Rada njikere Zuo ike ntụrụndụ ezumike mba eme ntụrụndụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ nloghachi ọgaranya Gburugburu ụgbọ mmiri ájá ihe ngosi Gbanye ndakpu ala mmiri Oké osimiri search nyocha Oge shopping ụlọ ahịa nlegharị anya igwe na-egwusi egwu South Asia South Pacific Southern egwuregwu tụrụ mmiri Star n'oge okpomọkụ ezumike ọkọchị Sun Farisii igwu mmiri Tahiti okpomọkụ Bahamas Seychelles Anyanwụ eme nke ọma IWU njegharị obodo osisi njem ebe okpomọkụ toro toro turkish nduru n'okpuru mmiri USA ezumike ezumike ezumike Venetian ọpupu echiche Villas nleta agha mmiri egwuregwu mmiri Mmiri ụzọ weather acha ọcha Gịnị mere agha ụwa Agha Ụwa nke Abụọ ogo ụwa afọ